Bo Wai, Author at Sainpwar
Articles by Bo Wai
စကစက Dr. A Nyein ကို ဖမ်းဆီးဖို့ အမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါပြီ…
September 25, 2021 Bo Wai 0
စေတနာရှင်ဆရာမလေး ဘေးကင်းပါစေ လို့ ဆုတောင်းပေးကြရအောင် စကစက Dr. A Nyein ကို ဖမ်းဆီးဖို့ အမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါပြီ သူတို့သတင်းမှာ ကြေညာတာကတော့ ကြာသပတေးညမှာ ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ ကိုကျော်ဌေး၊ ကိုဇော်နိုင်ဝင်းနှင့် ကိုကျော်ကျော်ဌေးတို့ဟာ ဆေးပစ္စည်းနှင့် လက်နက်တွေကို Dr. A Nyein ဆီ ပေးပို့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒေါက်တာက အဲဒီပစ္စည်းတွေနဲ့ CDF တပ်ဖွဲ့ကို ထောက်ပံ့ကူညီတာကြောင့်ဆိုပြီး ဖမ်းဝရမ်းထုတ်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါက်တာကတော့ ဒီလိုဖြစ်လာမှာ […]
သားတစ်ယောက်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့ ရင်နာနာနဲ့ရေးလိုက်တဲ့စာ….
September 24, 2021 Bo Wai 0
သားတစ်ယောက်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ မိခင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ​ကြေကွဲမှတ်တမ်းလေးတင်ပါရစေနော် သားအကြီးဆုံးမို့ သားအငယ်နဲ့သမီးလေးထက် အရင်အစစအရာရာ ဦးစားပေးချစ်ခဲ့ရတဲ့သား အမေဓမ္မစကူးလ်ဆရာမဆို သားကဓမ္မစကူးလ်ဆရာ အမေကင်းထောက်ဆို သားကကင်းထောက်ဆရာ အမေဆရာမဆို သားက guide အမေစျေးရောင်းရင် သားက model အမေ့အဝန်းအဝိုင်းလေးကို အား​​ဖြည့်ဂုဏ်တက်စေသူ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းမှာဘဲရောက်ရောက်လိုက်လျောညီထွေ ချစ်ခင်အောင်နေတတ်ပြီးအများအတွက် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသူ ဝါဆိုလပြည့်နေ့ရဲ့လမင်းကြီးနဲ့အတူအမေ့ဘဝထဲဝင်လာပြီး တော်သလင်းလပြည့်နေ့ရဲ့လမင်းကြီးနဲ့အတူ အမေ့ကိုချန်ထားပြီးနုတ်မဆက်ဘဲထွက်သွားသူ သူနဲ့ဆက်စပ်ရာပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုလမင်းကြီးပမာ အေးမြမှုတွေ ပေးစွမ်းခဲ့သူ အသက်(၂၂) နှစ်တောင်မပြည့်သေးတဲ့ အမေ့သားအာဇာနည်သူရဲကောင်း…တဲ့လားကြွေကျတာတောင် လင်းလက်နေတဲ့ကြယ်ပွင့်..တဲ့လား တောထဲတောင်ထဲ ဘယ်သူမှမသိတဲ့နေရာမှာDb တောင်မရဘဲ […]
ပျံလွန်တော်မူပြီးတာ တစ်လကျော်ကြာပြီးသော်လည်း ၁၀၈ တောင်ဆရာတော်ကြီး၏ ဆံတော်များရှည်လာနေ “ပျံလွန်တော်မူတာ ၁လကျော်ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်သည့် ၁၀၈ တောင် ဂမုန်းပေါင်းဆရာတော် ၏ ဦးခေါင်းတော်မှဆံတော်များ ရှည်လာ”၁၀၈ တောင် ဂမုန်းပေါင်းဆရာတော် ဥူးညာဏောပျံလွန်တော်မှုတာ ၁လကျော်ကြာမြင့်လာသည့်အချိန်မှာပဲ ဆရာတော်ကြီး​၏ ဦးခေါင်းတော်မှဆံတော်များလက်သည်းခြေသည်းများရှည်လာတာကို ထူးခြားစွာ မြင်တွေ့ရပါသည်။ဆရာတော်ကြီးက ဩဂုတ်လ၅ရက်နေ့က ပျံလွန်တော်မူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ “ပျံလွန်တော်မူတာ ၁လကျော်ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်သည့် ၁၀၈ တောင် ဂမုန်းပေါင်းဆရာတော် ၏ ဦးခေါင်းတော်မှဆံတော်များ ရှည်လာ”၁၀၈ တောင် ဂမုန်းပေါင်းဆရာတော် ဥူးညာဏောပျံလွန်တော်မှုတာ ၁လကျော်ကြာမြင့်လာသည့်အချိန်မှာပဲ […]
ကမ္ဘာမှာ ထောင်ကျနေရင်း ဆုရခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး နှစ်ယောက်အကြောင်း
ကမ္ဘာမှာထောင်ကျနေရင်းဆုရတဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်အကြောင်း ကမ္ဘာမှာ ထောင်ကျနေရင်း ဆုရခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး နှစ်ယောက်အကြောင်း ပရိတ်သတ်ကြီးရေ၊အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်တော့ကမ္ဘာမှာထောင်ကြနေရင်းဆုရတဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ဟာမြန်မာမှာပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်ကနိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ထပ်ဆင့်အကယ်ဒမီသရုပ်ဆောင်အိန္ဒြာကျော်ဇင်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က၁၉၈၉ခုနှစ်၊ဇူလိုင်လမှာပထမဦးဆုံးအကြိမ်နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ခံခဲ့ရပါတယ်၊နောက်ပိုင်းမှာ၁၉၉၁ခုနှစ်မှာဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုကိုချီးမြင့်ခံခဲ့ပါတယ်။ ၆နှစ်နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ခံထားရပြီး၁၉၉၅ခုနှစ်၊ဇူလိုင်လအတွင်းမှာပြည့်လည်လွှတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်နော်။ သရုပ်ဆောင်အိန္ဒြာကျော်ဇင်ကတော့၂၀၂၁ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ၁၅ရက်နေ့ကနေ့၁၉ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံOldenburg InternationalFilmFestivalရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာ မြန်မာသရုပ်ဆောင်အိန္ဒြာကျော်ဇင်ကSeymour CasselAwardForOutstandingPerformanceသရုပ်ဆောင်ထူးချွန်ဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်နော်။ Zawgyi vision ပရိတ်သတ်ကြီးရေ၊အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်တော့ကမ္ဘာမှာထောင်ကြနေရင်းဆုရတဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက် ဟာမြန်မာမှာပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်၊သူတို့နှစ်ယောက်ကနိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ထပ်ဆင့်အကယ်ဒမီသရုပ်ဆောင်အိန္ဒြာကျော်ဇင်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က၁၉၈၉ခုနှစ်၊ဇူလိုင်လမှာပထမဦးဆုံးအကြိမ်နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ခံခဲ့ရပါတယ်၊နောက်ပိုင်းမှာ၁၉၉၁ခုနှစ်မှာဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုကိုချီးမြင့်ခံခဲ့ပါတယ်၊၆နှစ်နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ခံထားရပြီး၁၉၉၅ခုနှစ်၊ဇူလိုင်လအတွင်းမှာပြည့်လည်လွှတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်နော်။ သရုပ်ဆောင်အိန္ဒြာကျော်ဇင်ကတော့၂၀၂၁ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ၁၅ရက်နေ့ကနေ့၁၉ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံOldenburg InternationalFilmFestivalရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာ မြန်မာသရုပ်ဆောင်အိန္ဒြာကျော်ဇင်ကSeymour CasselAwardForOutstandingPerformanceသရုပ်ဆောင်ထူးချွန်ဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်နော်။ Credit ကမ္ဘာမှာထောင်ကျနေရင်းဆုရတဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်အကြောင်း ကမ္ဘာမှာ ထောင်ကျနေရင်း ဆုရခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး နှစ်ယောက်အကြောင်း ပရိတ်သတ်ကြီးရေ၊အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်တော့ကမ္ဘာမှာထောင်ကြနေရင်းဆုရတဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ဟာမြန်မာမှာပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်ကနိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ထပ်ဆင့်အကယ်ဒမီသရုပ်ဆောင်အိန္ဒြာကျော်ဇင်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က၁၉၈၉ခုနှစ်၊ဇူလိုင်လမှာပထမဦးဆုံးအကြိမ်နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ခံခဲ့ရပါတယ်၊နောက်ပိုင်းမှာ၁၉၉၁ခုနှစ်မှာဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုကိုချီးမြင့်ခံခဲ့ပါတယ်။ […]
စစ်တပ်၏ စစ်ကြောရေးတွင် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရသည့် မစိုးမီမီကျော် အရက်ပျံသောက်၍ သေကြောင်းကြံ…..
September 22, 2021 Bo Wai 0
စစ်တပ်၏ စစ်ကြောရေးတွင် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရသည့် မစိုးမီမီကျော် အရက်ပျံသောက်၍ သေကြောင်းကြံသော်လည်း မသေဘဲ ဆေးရုံရောက်နေ ရန်ကုန်၊ စက်တင်ဘာ ၂၂ တနင်္သာရီတိုင်း ထားဝယ်မြို့တွင် အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့က ဖမ်းဆီးခဲ့သော မစိုးမီမီကျော်သည် စစ်တပ်၏ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုဒဏ်ကို မခံနိုင်၍ အရက်ပျံသောက်၍ သေကြာင်းကြံသော်လည်း မသေဘဲ စစ်ဆေးရုံတွင် တက်ရောက်ကုသမှု ခံယူနေရကြောင်း ထားဝယ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂက သတင်းထုတ်ပြန်သည်။ စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့တွင် အကြမ်းဖက်စစ်တပ်သည် မသျှားပြည့်ခင်ကို […]
ရောင်နီသန်းတဲ့ခေတ်ကိုရောက်ရင် CDM ဝန်ထမ်းတွေကို ကျေးဇူးဆပ်မယ့် အိန္ဒြာကျော်ဇင်
ရောင်နီသန်းတဲ့ခေတ်ကိုရောက်ရင် သူမပိုင်ဆိုင်တဲ့”သုဒြာ”ထုတ်လုပ်ရေးကတဆင့် CDM ဝန်ထမ်းတွေကို ကျေးဇူးဆပ်မယ့် အိန္ဒြာကျော်ဇင် အကယ်ဒမီမင်းသမီးချောအိန္ဒြာကျော်ဇင်နဲ့အကယ်ဒမီမင်းသားပြေတီဦးတို့ကတော့လူတကာအာရံုစိုက်ခံရတဲ့ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တွေဖြစ်ပေမယ့်အရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာပြည်သူတွေနဲ့တသားတည်းအတူတူရှိနေလျက်ရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြေတီဦးကလက်ရှိမှာတော့ပုဒ်မ၅၀၅-ကနဲ့တရားစွဲဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခံထားရပေမယ့်အိန္ဒြာကျော်ဇင်ကတော့ပြည်သူတွေနဲ့အတူတူဆက်လက်ရပ်တည်ရင်းပြည်သူတွေနဲ့အတူတူငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာတော့အိန္ဒြာကျော်ဇင်ကCDMမှာပါဝင်ပေးကြတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်သူမပိုင်ဆိုင်တဲ့ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကနေပြီး ကျေးဇူးဆပ်မယ့်အကြောင်းကိုပြောပြလာပါတယ်။ အိန္ဒြာကျော်ဇင်က“ဒီအမှောင်တွေလွန်သွားလို့ရောင်နီသန်းတဲ့ခေတ်ကိုရောက်တဲ့အခါကျွန်မတို့ရဲ့“THUDRA” Productionမှထုတ်လုပ်တဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေရုံတင်ရင်CDMမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့မိသားစုဝင်1000 (ရုပ်ရှင်လက်မှတ်အစောင်ရေ1000) ကို လက်ဆောင်ပေးပါမယ်။ CDMပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ကျေးဇူးဟာအားလုံးအပေါ်မှာရှိတဲ့အတွက်တတ်နိုင်သလောက်အသိအမှတ်ပြုကျေးဇူးဆပ်တဲ့သဘောပါပဲ။ ”ဆိုပြီးလေးစားစွာပြောလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အိန္ဒြာကျော်ဇင်ကတော့ရောင်နီသန်းတဲ့ခေတ်ကိုရောက်ရင်သူမပိုင်ဆိုင်တဲ့”သုဒြာ”ထုတ်လုပ်ရေးကဆင့်CDMဝန်ထမ်းတွေကို ကျေးဇူးဆပ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးသာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက္ပါတယ်နော်။ Source: Eaindra Kyaw Zin ‘s fb Unicode ရောင်နီသန်းတဲ့ခေတ်ကိုရောက်ရင် သူမပိုင်ဆိုင်တဲ့”သုဒြာ”ထုတ်လုပ်ရေးကတဆင့် CDM ဝန်ထမ်းတွေကို ကျေးဇူးဆပ်မယ့် အိန္ဒြာကျော်ဇင် အကယ်ဒမီမင်းသမီးချောအိန္ဒြာကျော်ဇင်နဲ့အကယ်ဒမီမင်းသားပြေတီဦးတို့ကတော့လူတကာအာရုံစိုက်ခံရတဲ့ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တွေဖြစ်ပေမယ့်အရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာပြည်သူတွေနဲ့တသားတည်းအတူတူရှိနေလျက်ရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြေတီဦးကလက်ရှိမှာတော့ပုဒ်မ၅၀၅-ကနဲ့တရားစွဲဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခံထားရပေမယ့်အိန္ဒြာကျော်ဇင်ကတော့ပြည်သူတွေနဲ့အတူတူ […]
September 21, 2021 Bo Wai 0
စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ ပြည်သူ့စစ်က စစ်သင်တန်းပေးရန် စည်းရုံးသော်လည်း တက်ရောက်သူမရှိ ပူတာအို – စက်တင်ဘာ ၂၁၊ ၂၀၂၁။ ကချင်ပြည်နယ် ပူတာအိုမြို့တွင် စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ ခေါင်လန်ဖူးဌာနေပြည်သူ့စစ်က စစ်သင်တန်းတက်ရောက်ရန် ဒေသခံပြည်သူများကို လိုက်လံစည်းရုံးနေသော်လည်း တက်ရောက်သူမရှိကြောင်း သိရသည်။ ခေါင်လန်ဖူးဌာနေပြည်သူ့စစ်တွင် စစ်သင်တန်း တက်ရောက်သင်ယူမည့်သူ မရှိသောကြောင့် ပူတာအိုမြို့ပေါ်ရှိ ရွာများတွင် လိုက်လံစည်းရုံးနေသည်ဟု ဒေသခံတစ်ဦးက The 74 Media ကိုပြောသည်။ “လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ကတည်းကဟုတ်ပြီ။ ပြည်သူ့စစ်မှာ ဘာအခကြေးငွေပေးစရာမလိုဘဲ သင်တန်းတက်လို့ရတယ် […]
RIP ပါ ညီငယ်လေး… မြဝတီမြို့ ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာ အကိုတို့ အတူချီတက်ခဲ့ ကြတာ မှတ်မိနေဆဲပါ…. တော်လှန်ရေးမှာအရွယ်နဲ့မမျှအောင် မင်းရဲ့တက်ကြွမှုတွေကိုမြင်ခဲ့ဘူးလို့ ညက အိမ်ထဲ မိုင်းပေါက်ကွဲတဲ့ကေစ့်မှာ ကျဆုံး သွားတဲ့ သတင်းအတွက် များစွာစိတ်မကောင်း ဖြစ်မိပါတယ်….. ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေလည်း တက်တက်ကြွကြွလုပ်ခဲ့ တော်လှန်ရေးအတွက်လည်းရှေ့ဆုံးက တက်ခဲ့တဲ့လူငယ်ကြယ်ပွင့်လေးကြွေလွှင့်ခဲ့ရပြန်ပြီ…. စိတ်ဖြောင့်ဖြောင့်နဲ့သာ သွားပါ ညီလေး ….. နောက်ဘဝမှာ လူပြန်ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာပြည်မှာ မဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ အကို ဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ် ကွာ…..😔 ရဲမင်း(AAC)—🚩 Unicode […]
တနင်္သာရီတိုင်း ထားဝယ်မြို့နယ်က တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအပါအဝင် လူငယ် ၃ ဦးကို စက်တင်ဘာ ၂၀ ရက် ညနေပိုင်းမှာ စစ်ကောင်စီတပ်က ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ စက်တင်ဘာ ၂၀ ရက်၊ ညနေ ၃ နာရီခွဲခန့်အချိန်က ထားဝယ်တက္ကသိုလ် မြန်မာစာအထူးပြု တတိယနှစ်ကျောင်းသား ကိုစိုးပြည့်အောင်နဲ့ မစိုးမီမီကျော် (အင်္ဂလိပ်စာအထူးပြု ကျောင်းသူအဟောင်း) တို့ နေအိမ်မှာ ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခံရတာလို့ ဒီမိုကရေစီအရေး လှုပ်ရှားမှု […]
သားကို စစ်ကြောရေးမှာ ဖမ်းဆီးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေမှု မခံစားနိုင်၍ဖခင်ဖြစ်သူ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အဆုံးစီရင်
September 20, 2021 Bo Wai 0
စစ်တပ်က သားဖြစ်သူကို စစ်ကြောရေးမှာ ဖမ်းဆီးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေမှု ဖခင်ဖြစ်သူ မခံစားနိုင်၍ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အဆုံးစီရင် By ရန်ကုန်ခေတ်သစ် ပဲခူးတိုင်း၊ ပြည်ခရိုင်၊ ပေါင်းတည်မြို့မှာ အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က သားအဖ နှစ်ဦးကို Mytel တာဝါတိုင်တွေ ဖောက်ခွဲဖို့ ကြံစည်တယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်နဲ့ ဖမ်းဆီးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့ပြီး သားဖြစ်သူ ညဥှ်းပန်းနှိပ်စက်ခံနေရမှုကို ဖခင်ဖြစ်သူက တွေ့မြင်ကြားသိနေရရာက မခံစားနိုင်တော့တဲ့အတွက် နောက်ဆုံးမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်သွားခဲ့တယ်လို့ မိသားစုနဲ့ နီးစပ်သူတွေက ရန်ကုန်ခေတ် သစ်ကို ပြောဆိုပါတယ်။ […]